Izindlela ezihamba phambili zeCamScanner ngo-2020 - i-Android ne-iPhone - Izinhlelo Zokusebenza
ICamScanner ukuskena kumathuluzi e-PDF ama-smartphones aqhamuka kunjiniyela waseChina, INTSIG Information Co. Ltd.Njengoba wazi, uhulumeni waseNdiya usanda kufaka ukuvinjelwa kwezinhlelo zokusebenza ezingama-59 zamaShayina.
Ngakho-ke, ngenkathi uhlelo lokusebenza lusengatholakala ku-Google Play Isitolo naku-App Store, kungenzeka lisuswe kuzingxenyekazi zombili zaseNdiya kungekudala.
Yebo, ukube ubungomunye wabasebenzisi abakhuthele balolu hlelo lokusebenza okuyi-scanner yedokhumenti, kungenzeka ukuthi ubheke okunye okuzothatha indawo efanayo.
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeCamScanner:
Lolu hlelo lokusebenza lakhiwa i-Google, i-PhotoScan kungenye indlela enhle engakuvumeli nje ukuthi uhlole imibhalo yakho yansuku zonke, kodwa futhi ikuvumela ukuthi wenze izithombe zibe ngedijithali bese uziskena noma ngabe ushesha ukuthola idokhumenti yakho iskenwe.
Ungagcina lezi zithombe eziskeniwe njengamakhophi edijithali futhi.
2. IMicrosoft Office Lens
I-Microsoft Office Lens futhi uhlelo lokusebenza olunamandla kakhulu ongalusebenzisa ukufaka esikhundleni sohlelo lwakho lokusebenza oludala lweCamScanner kudivayisi yakho. Njengoba igama lisho, uhlelo lokusebenza lwakhiwa yiMicrosoft futhi luvumela abasebenzisi ukuskena zonke izinhlobo zemibhalo ngaphambi kokuthi zithunyelwe ngqo kwi-Word noma kwi-PowerPoint.
Uhlelo lokusebenza luyindlela engcono kakhulu ikakhulukazi kulabo asebevele beyingxenye yohlelo lweMicrosoft.
3. I-Adobe Scan
I-Adobe Scan iskena se-PDF esine-OCR. Ngokuqinisekile kungenye yohlelo lokusebenza lokuqala oluza engqondweni uma ucabanga ngezinye izindlela zeCamScanner.
Lolu hlelo lokusebenza lakhiwa yi-Adobe futhi lungabhekwa kalula njengenye yezinketho ezethembeke kakhulu esigabeni esifanayo ngokuqinisekile. Ungavele ufake i-Adobe Scan kudivayisi yakho yeselula mahhala bese uqala ukuskena amadokhumenti njengamanje. Uhlelo lokusebenza luyatholakala kuzo zombili izingcingo ze-iOS ne-Android.
4. I-Google Drayivu
Namuhla, abantu abaningi basebenzisa i-Google drive noma banayo kumafoni abo ngaphandle kokubona iqiniso lokuthi lolu hlelo lokusebenza lungaskena amadokhumenti. Yize kungamangaza, iGoogle Drayivu empeleni ineskena esakhelwe ngaphakathi kuhlelo lokusebenza uqobo.Ukuphela kokufanele ukwenze, vele uthephe inkinobho yokuhlanganisa futhi ungaskena kalula amadokhumenti, amarisidi, namanothi kalula nokunye okuningi.
Masibe ngqo lapha, i-Google Drayivu ayiyona into efakwe njengeCamScanner, kepha inikela ngesici sokuskena nokulayisha esilula esingaba wusizo kunoma ngubani ofuna uhlelo olulula lokuskena.I-Google Drayivu futhi inokutholwa komphetho nokusebenza kwezitshalo ngesihleli esiyisisekelo sohlelo lokusebenza.
Esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani noma ngubani engakhetha iGoogle Drayivu njengenye indlela yeCamScanner yile - lesi sithwebuli singaba lula kakhulu futhi singabi nezinto eziningi, kepha ungahlala ukhululeke ukuthi imibhalo yakho isezandleni eziphephile. Uma kunjalo, i-Google Drayivu ingaba indawo enhle.
Ngenkathi i-Google Drayivu ingahle iphansi kuzici ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza. kungukuya kuhlelo lokusebenza lomuntu ofuna uhlelo olulula lokuskena ngaphandle kwazo zonke izici eziphezulu.Futhi, i-Google Drayivu ingathenjwa kalula futhi kulula kakhulu ukuthi noma ngubani ayisebenzise.
5. Iskena sokuskena
I-Scanbot ngokuyisisekelo iyefana neCamScanner ngokuya ngezici zayo ezinikezwa uhlelo lokusebenza. Ingakwazi ukuskena zonke izinhlobo zamadokhumenti futhi ibona ngokuzenzakalela imiphetho futhi iyitshale.
Kukhona futhi ukuskena kwamakhasi amaningi okutholakalayo nokuqashelwa kombhalo kwe-OCR futhi. Ukuqashelwa kombhalo kusiza nabasebenzisi ukuthi bacinge amadokhumenti anokuqukethwe okukuwo. Ngakho-ke, kungasiza kakhulu kunoma ngubani.
I-TapScanner olunye uhlelo lokusebenza lokuskena olunezici njenge-OCR, ukuskena kwe-batch, nezinye izici ezimbili ezimangalisa kakhulu.Isici sokuqala esimangazayo ukuthi uhlelo lokusebenza empeleni lungathatha cishe izithombe ezintathu ngasikhathi sinye ukudala imibhalo eskenwe enemininingwane. Kepha, ukuphela kwendaba kulokhu - kwamanye amadivayisi, lokhu kungabonakala kuhamba kancane kunezinye izinhlelo zokusebenza, kepha leyo nkinga iyaqondakala ngokusebenza kwayo.
Esinye isici esimangalisayo yikhono lokusayina ngokwamanani ama-PDF akho agciniwe. Lesi sici sihlukile nokuthi alukho olunye uhlelo lokusebenza lokuskena esilwaziyo, njengamanje, olungakwenza. Kukhona futhi nokuhlunga okuningi okufana neCamScanner ukuthola idokhumenti yakho ngendlela oyifunayo. Ngingakuncoma kakhulu lokhu.
Lolu olunye uhlelo lokusebenza olubizwa ngeTurboScan - likuvumela ukuthi wenze cishe wonke umsebenzi uCamScanner akwazi ukuwenza. Lolu hlelo lokusebenza lubonisa ukutholwa komphetho wemoto, ukuskena okuningi, nezici eziningi kanye nemodi yokucija edale amakhophi angaskena kangcono kunoma ngubani ofuna ukuskena amadokhumenti abo.
8. Isithwebuli Esincane
Lesi isithwebuli esilula kakhulu nesilula ukuskena amarisidi nemibhalo. Kuyaziwa kakhulu ukuthola imiphetho yedokhumenti ngokuzenzakalela nokugcina ifayili kuhlelo lwakho lokusebenza lwegalari.
9. I-Evernote Scannable
I-Evernote Scannable ingenye indlela eya kuCamScanner futhi ingesinye sezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokuthwebula imibhalo.Ingasetshenziswa kalula kusuka efonini yakho futhi. Ake sithi,Uma usebenzisa i-iPhone noma i-iPad ungayisebenzisa nakanjani.Uma uyiqhathanisa neCamScanner, i-Evernote Scannable inikeza izici ezifanayo kakhulu nangolwazi olumangalisayo lomsebenzisi.
Okokuqala, ungaskena amanothi kuhlelo lokusebenza, unga skena amakhadi webhizinisi noma amaresidi futhi ngokuyisisekelo noma yimuphi umbhalo wephepha onomusa ngokucacile okumangazayo. Lolu hlelo lokusebenza lusebenzisa nokutholwa komphetho ohlakaniphile futhi lutshala isithombe ngokuzenzekelayo. Ngemuva kwalokho, ungagcina imibhalo eskeniwe kuroli yakho yekhamera noma uyihambise njengamafayela e-PDF. Kukhona ne-imeyili kanye nenketho yokuhlanganisa ifu etholakala ngaphakathi kohlelo lokusebenza ukuze ukwazi ukuskena idokhumenti kalula bese uyithumela kubangani bakho noma kunoma ngubani ngaphandle kwenkinga.
Ukuphela kwento ukuthi, ayinazo ezinye izici ezinjenge-OCR nesichasiselo. Ngaphandle kwalokho, u-Evernote Scannable wenza izisekelo kahle kakhulu. Ngemuva kokubheka wonke la maphuzu, ungakhetha i-Evernote Scannable uma ufuna isipiliyoni sokuskena esingenamthungo.
I-Notebloc ingenye indlela yeCamScanner enezici eziningi ezifana neCamScanner.Okokuqala, ungaskena izinhlobo ezahlukene zemibhalo futhi udale nezithombe eziskeniwe ezisezingeni eliphakeme. Kukhona nokutholwa kwe-smart edge okusebenza kahle kakhulu futhi kufana kalula neCamScanner. Ngakho-ke, ingasetshenziswa endaweni yeCamScanner.
Futhi unokuhlelwa kwedokhumenti, ukuskena kwe-batch, ukwesekwa kwe-OCR, nokuhlanganiswa kwamafu ngaphakathi kohlelo lokusebenza uqobo. Kodwa-ke, masithembeke, ngokusho kwethu isici esihle kakhulu se-Notebloc ukuthi ayikho i-watermark kumadokhumenti askeniwe futhi lokho nje kuyinto enhle kakhulu ngakho.
Sizwile kubantu abaningi ukuthi iCamScanner iza ne-watermark enkulu engenangqondo futhi i-Notebloc ayinayo i-watermark kumadokhumenti ayo. Ngakho-ke, uma ufuna enye indlela yeCamScanner ngaphandle kophawu lwe-watermark lapho-ke i-Notebloc ingaba inketho emangalisayo kuwe.
Ngakho-ke njengoba nina nibona lolu uhlu lwethu lwezindlela ezingcono kakhulu zeCamScanner ezilusizo impela futhi zabelana ngezici ezifanayo futhi ezingasetshenziswa esikhundleni seCamScanner. Kulolu hlu, kunezinye izinhlelo zokusebenza eziyizinhlelo zokusebenza zokuthwebula eziphelele uqobo lwazo futhi kukhona ezinye okuhle kakhulu ukuskena nokwabelana ngefayela noma idokhumenti efanayo. Empeleni kuya ngesidingo sakho, ungakhetha noma yiluphi uhlelo lokusebenza olufunayo ohlwini olungenhla. Siyaqiniseka impela ukuthi ngeke udumazeke nakancane.
indlela engcono yokulanda ama-movie wamahhala
Amakhodi we-roblox promo 2019 awaphelelwe yisikhathi
reddit indawo enhle yokubuka imibukiso ye-tv
ungayithola kanjani i-robux yamahhala mahhala
ipad ayikwazi ukuxhuma ku-iTunes